Din train elektrọn eletrik eletrik Emeputa - China Din train elektrọn eletrik eletrik eletrik, Factory
3PHASE 4WIRE ENWETA METER
Nke a adopts flame-retardant shei na-abụghị ọla, nke dị ọkụ nha ma dịkwa mfe ịwụnye; ọ na-anakọta ihe ngosipụta nke ike oge ọ bụla na mita ọ bụla ume, kwa ụbọchị efu isi ihe na-egosi ume ọkụ, yana ọgụgụ mita kwa ụbọchị na-egosi ike ume oyi kpọnwụrụ; ebe dịpụrụ adịpụ na gburugburu mpaghara yana usoro ọgụgụ ihe omimi ajụjụ.
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (IC kaadi)
Mpekere 3 izizi elekere izizi ume (IC kaadi) bu ihe omumu ike ohuru nke ulo oru anyi guzobere ma weputa ya site na ntuzi aka nke GB / T17215.321-2008 na GB / T17215.323-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Single-phase din train elele eletriki eletrik (nọ n'ọrụ) bụ ihe ọhụrụ na-atụpụta ike ike nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta dịka nkọwa ndị dị na GB / T17215.321-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Single-phase din train elele eletriki eletriki elekere eletriki (ime ime) bụ ihe ọhụrụ na-eji ike elele eletrik eletrik mepụtara ma ụlọ ọrụ anyị mepụtara site na nkọwapụta aka nke GB / T17215.321-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit na usoro mmepụta nke SMT, ya na oru dika imuta ihe eletriki, nhazi data, nleba anya oge, na imekorita ozi.
Single frasi DIN Rail Energy Mita （IC kaadi)
Single-phase din train elektrik elekere eletriki elekere eletriki elekere elekere (IC kaadi) bu ihe ohuru nke ike ike oku nke ulo oru anyi guzobere ma weputa ya site na ntuzi aka nke GB / T17215.321-2008. , yana ọrụ dịka ntinye ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta.
Single frasi DIN Rail Energy Mita orm obibi）
Single-phase din train elektrik elekere eletrik (ụlọ obibi) bụ ihe ọhụrụ na-eji ike eletrik eletrik arụpụtara nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta ya site na nkọwapụta aka nke GB / T17215.321-2008 ya na oru dika imuta ihe eletriki, nhazi data, nleba anya oge, na imekorita ozi.
3PHASE 4WIRE ENETGYETETET (remote)
Igwefoto 3 nke 4 waya eletriki (ime ime ala) bu ihe omumu ohuru nke ike nke ulo oru anyi guzobere ma weputa ya dika uzo oru aka nke GB / T17215.321-2008 na GB / T17215.323-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.